Fantaro i Ian McCallum, mpampiantrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ho an’ny 23-29 Mey · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2019 5:22 GMT
Sary natolotr'i Ian McCallum.
Amin'izao taona 2019 izao ka ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-
piteny an-tserasera, hifandimby ireo mpikatroka sy mpanandra-teny vazimba amerikana sy avy
amin'ny Firenena Voalohany hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech hizara ny zava-niainan-
dry zareo amin'ny fanomezana aina indray sy fampiroboroboana ny fiteny Vazimba Teratany. Ity
lahatsoratra fampahafantarana ity izao hiresaka momba an'i Ian McCallum (@IanMcCallum3) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Ian McCallum no anarako. Mpikambana ao amin'ny firenena Munsee-Delaware aho any Atsimo-andrefan'i Ontario, Canada. Mpianatra ny fiteny faharoa amin'ny fiteny Lunaape (Munsee na Delaware) aho. Nianatra ilay fiteny nandritra ny 25 taona aho. Tiako ny mihazakazaka, miasa amin'ny fiara tranainy sy amin'ny fikarohana ara-tantara. Miasa ho mpampianatra aho any amin'ny faritanin'i Ontario .
RV: Manao ahoana ny fiteninareo amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto amin'izao fotoana?
Manana rakitsoratra tsara ny fiteny Lunaape. Misy rakibolana feno sy boky maro nosoratana ho ampiasaina any an-tsekoly sy ny kilasy hariva ihany koa any amin'ireo vondrom-piarahamonina Lunaape roa any Ontario (Munsee-Delaware sy Moraviantown). Azo jerena ao amin'ny http://www.munsee.ca/language-resources/ ny singany amin'ireo boky ireo. Tandindonin-doza ny fiteny Lunaape (Ontario) satria latsaky ny 5 ny mampiasa izany ho fiteny voalohany ary latsaky ny 100 ireo mpianatra mianatra izany ho fiteny faharoa ary mahatakatra tsara ilay fiteny amin'ny sehatra samihafa . Misy ny fandaharan'asa famelomana aina napetraka eo amin'ireo vondrom-piarahamonina roa ireo ary ampianarina any amin'ny fandaharam-pianarana any amin'ny toeram-pitaizana zaza madinika sy any amin'ny sekoly fanabeazana fototra ao an-toerana ihany koa ilay ny fiteny.
Maniry ny hanasongadina ny ezaka hamelomana aina ny fiteny Lunaape ao amin'ny firenena Munsee Delaware, ao amin'ny fandaharam-pianaran'ny vondrom-piarahamonina, ao amin'ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly, ao amin'ny fampianarana fiteny mandritra ny faran'ny herinandro, ary amin'ny fampiasana ny tambajotra sosialy (facebook sy twitter) aho.
RV: Inona ny tena mahatonga anao havitrika nomerika ho amin'ny fiteninao? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Ny hanomezana ny fiteny Lunaape ho an'ny mpikambana ao amin'ny tarika izay miaina ivelan'ny toerana manokana no tena antony manosika ahy havitrika nomerika. Tiako ny hisarihana ny saina momba ny fiteny Lunaape, ny fampiasana azy maharitra. Ny hanampy kokoa ireo mpianatra ny fiteny faharoa ho lasa mahay miteny tsara sy mamorona toerana maro kokoa izay iainan'ny fiteny no fanantenako sy nofinofiko ho an'ny fiteny Lunaape .